IBahnhof 123, (Fridingen), igumbi lamawele, 20sqm, kunye nekhitshi ekwabelwanayo ngalo / igumbi lokuhlambela, max. 3 abantu - I-Airbnb
IBahnhof 123, (Fridingen), igumbi lamawele, 20sqm, kunye nekhitshi ekwabelwanayo ngalo / igumbi lokuhlambela, max. 3 abantu
Igumbi lamawele, 20sqm, kunye nekhitshi ekwabelwanayo / igumbi lokuhlambela, ubuninzi babantu aba-3
Igumbi lamawele angama-20sqm lineebhedi ezimbini zomntu omnye kunye newodrophu. Ibhedi eyongezelelweyo inokubonelelwa nomntu wesithathu. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela kwabelwana ngazo nezinye iindwendwe.
Embindini wepaki yendalo yasendle kunye neyothando i-Obere Donau, isikhululo sikaloliwe i-123 eFridingen ibonelela ngendawo yokuhlala yosapho enobuhlobo obukhethekileyo bembali.
Wamkelekile kwisikhululo sikaloliwe esiyimbali eFridingen! Ukuzalisa isakhiwo esidwelisiweyo ukusuka kwi-1890 ngobomi kwakhona kunye nokuvula iingcango zaso kubahambi yayingumcimbi osondeleyo kwiintliziyo zethu - iintsapho ezintathu zaseFridingen. Ngentwasahlobo ka-2020 safumana isikhululo sikaloliwe kwaye saqala ukusihlaziya ngothando kunye.
Amagumbi amane eendwendwe aneebhedi ezili-12 zizonke abekwe kumgangatho ongaphezulu. Ikhitshi-igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo yabelwana ngeendwendwe.
Amagumbi ethu osapho oluphangaleleyo alungele ngokukodwa abahambi kunye nabantwana: kukho iibhedi ezimbini kwigumbi elidityanisiweyo ngqo kwigumbi lokulala labazali, kwaye ngaphezulu kunokongezwa.
Isitishi se-123 sikwayindawo efanelekileyo yokuhlalisa amaqela amakhulu namancinci. Ukuba kuyimfuneko, umgangatho ophezulu, onokuhlala abantu abaninzi, unokuqeshwa ngokubanzi. Igumbi lokulinda eliyimbali kumgangatho osezantsi linokuthi ke (ngesicelo) libe yindawo yokuphumla eyongezelelweyo. Esi sikhululo sikwagcina i-mechanical interlocking yamanqaku kunye nemiqondiso, esasebenza.
Indawo yokupaka iyafumaneka kanye ecaleni kwesakhiwo. Iibhayisekile zinokupakishwa kwindawo yokungena etshixiweyo kwaye ii-e-bikes nazo zinokubizwa apho. Emini, oololiwe beRegional Express bamisa kanye ecaleni kweqonga kuhambo lwabo phakathi kweDonaueschingen kunye ne-Ulm rhoqo kwiiyure ezimbini. Nangona kunjalo, akukho loliwe ebusuku - uhambo lwasimahla ukuze ulale kamnandi!